Axmad – Page 10 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dilal iyo Qaraxyo ka dhacay Muqdisho iyo duleedkeeda.
Saacadihii lasoo dhaafay, waxaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo duleedkeeda ka dhacay howlgallo kala duwan oo isuga jira dilal qorsheysan iyo qaraxyo xoogan. Sarkaal lagu magacaabo Nuur Cashara oo kamid ahaa ciidamada Ps-ta ama…
Kitaabka Al-Arbacuuna-Nisaa’iyah: Sheekh Cali Katiin(Dhageyso 21)
Kitaabka Al-Arbacuuna-Nisaa’iyah waa kitaab qayim ah oo si gaar ah u taabanaya haweenka muslimaaka ah, waxaana Idaacadda Al-Furqaan ka jeediya Sheekh Cali Katiin oo kamid ah culimada diinta Islaamka. Halkan ka dhagayso Dersiga 21-aad ee…
Kitaabka Qasasul Anbiyaa; Sheekh Cabdi-Raxmaan Firin(Dhageyso 21)
Dowladda Xabashida Itoobiya oo cadaawad fog u qabta shacabka Soomaaliyeed, kumanaan katirsan ciidamadeedana ay duulaan ku joogaan Soomaaliya ayaa si toos ah khariirada dalalka Africa waxay uga saartay wadankeena. Khariirad cusub oo lagu…
Ciidamada Kenya oo lagu weeraray deegaanka Qowqaani ee Jubbooyinka.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay waxay weerar culus ku qaadeen difaacyada ciidamada Kenyaatigu ku leeyihiin deegaanka Qowqaani ee gobollada Jubbooyinka. Dagaalka ayaa mid culus, waxaana ciidamada…
Kitaabka Al-Arbacuuna-Nisaa’iyah: Sheekh Cali Katiin(Dhageyso 19-20)
Kitaabka Al-Arbacuuna-Nisaa’iyah waa kitaab qayim ah oo si gaar ah u taabanaya haweenka muslimaaka ah, waxaana Idaacadda Al-Furqaan ka jeediya Sheekh Cali Katiin oo kamid ah culimada diinta Islaamka. Halkan ka dhagayso Dersiga 19-aad ee…
Kitaabka Qasasul Anbiyaa; Sheekh Cabdi-Raxmaan Firin(Dhageyso 19-20)